ithala elijonge kwizibuko - I-Airbnb
ithala elijonge kwizibuko
Maratea Porto, Basilicata, Italy
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRosa Lisa
Le ndlu yindawo encinci ye-attic ene-attic ene-terrace, kwiindlela zechweba laseMaratea ezijongene nechweba, elibandakanya igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala kunye nokukhupha iibhedi ezimbini ezingatshatanga. Izibuko yimizuzu embalwa yokuqhuba ukusuka kwiziko lembali kunye neelwandle zonxweme lwaseCilento
Le ndlu ikumgangatho ophezulu kwisakhiwo esinemigangatho emibini kwaye ayinaso ilifti
IMaratea idume ngeecawe zayo ezininzi kunye nomfanekiso oqingqiweyo kaKristu uMhlawuleli olawula umsantsa. Sisiseko esihle sokutyelela zombini i-Basilicata kunye ne-Cilento, ngokukodwa iGulf of Policastro. IMaratea idityaniswe kakuhle ngesantya esiphezulu esivela eRoma naseNaples.
Kwizibuko laseMaratea kukho iindawo zokutyela ezininzi, iibhari, iivenkile zokutyela kunye nevenkile encinci yegrosari, kodwa iidolophu ezikufutshane zaseFiumicello kunye neziko lembali linayo yonke into.
Umbuki zindwendwe ngu- Rosa Lisa
Amo molto viaggiare
Ndiya kuhlala ndifumaneka ngeposi okanye ngefowuni.
ezantsi uhlala uNksk. Angela oza kuhambisa kwaye aqokelele izitshixo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maratea Porto